Daabaleen Oromoo akka Daabalee Habashati yaaduu hin qabu.
Oromoon Kololnefatamee Garbonfatamee enyuman isaa dhorkamee siirna bituu habasha jalati jirachaa ture. Qabeenya Oromoo fi Oromiyaan qabduu hindi Habashan fudhatamee Oromoon Habasha tajjajila ture. Qabsoon Oromoo rakkoo kana furuuf mulata qabun karoora fi tarsimoo bafatee galma ka’eef ga’uuf wagoota 40 ol qabsa’aa jira. Galmi kun ammoo Bilisumaa fi Walabuma Oromiyaati kana ala ta’uu hin danda’u. Kitaba Bu’aa ba’ii qabsoo ummata Oromoo kessatti Amala Habashoota ilaalchisee kutaa 2ffaa “ Wayyaaneefi dhabileen Habasha Dimokiraatawaa ta'u hin danda'an. Kanafuu Wayyanee buqisuu qoofa jeedha fula 324 hanga 380 Kanaaf ammoo Darggagoo fi ummatii Oromoo gurma’an qabsa’uu qabu jeedha fula 592 – 679 dubsa. .
Warii Habasha ammoo Fala kanaati: siirna Habasha Dargiin buqisee sana deebisuuf qabsa’aa jiru, wari TPLF akkuma kanan dura jeene Rakkon Tigire irra ga’ee waan hin jireef kayyoon, galma fi mulata dhabata hin qaban, bakkuma ga’aantti kayyoo jijjiru, kara fayyida isaanf fiduu hunda hordofa asii ga’aan. Qabeenya biyyatti erga dhunfatan booda kayyoon isaan fi mulatii isaan hundi qabeenya samatani Angoo irra kara ittin turan haalaa mijeefachuu qoofa. Kanafuu, Deemokrasii, Bulchiinsa garii kkf isaa dubatan kana isaanu wa'ee isaa hin beekan, wa'ee mirga dhala nama ilee dubisani hin beekan. Utuu kana beekan heera biyyati cabsudhan Oromiyaa (Ambo, Wallaga, Hararge kkf), Kiba Sidama, Shakoo Mazanger, Gambela kkf waraana itti boboasan hin faixan turan. Baratoota harka qula adeeman homa waraanan hin ajeesan turan. Kanafuu TPLF fi daabaleen TPLF feedhi fi fayyida of tikifachuu wara adeeman malee waraa rakko ummata hikuuf kaayyefatee deemuu miti.
Nafxanyoon Moofan (Amhara ) ammoo hanguma TPLF kana ilee sobani deemokrasii fi bulchiinsa garii mirga dhala nama kabachifna jeedhani waraqaa irratti ilee sobani wara ka'an ilee miti. Akkuma Minilik wagoota 150 duratti yaadu sanati wara yaadan dha. Amma ilee Afaan Oromoo Afaan biyyooleesa ta’uu hin qabuu, Nannoon Oromiyaa jeedhamuu jirachuu hin qabuu, Lafa fi qabeenya keessan irratti ajjaajuu hin qabdan, Daanga fi heerii Mootummaa nannnoolee hundi diigamuu qaba wara jeedhani dha. Waan biran hafinan yaakki Minilik Oromoo irratti raawwate siiridha, Siidan Aannoolee fi Caalanqoo diigamuu qabuu jeedhani wara falma jiran dha. Jarii kun ammoo akka nama jaraa 21ffaa waraa yaadani barachuuf ilee qoophi ta’aan miti.
Kanaafuu Jaroota kana laman Habasha moofa fi Habasha Haraa walin waanti walitti nu fiduu hin jiru, waan irratti wali galuu dandeenyuu ilee hin jiru. TPLF wa'ee Bulchiinsa garii fi deemokrasi odeesuu mirga dhala nama akkamin akka sarba jiruu, waan ummataa Oromoo irratti goodhamu ragaa gudadha. Heera Feederalaa Cabsuun daanga Oromiyya cabsee Lafa Nannoo Finfinne fudhachuuf deema. Kun seera fi heera biyyati falessa. Amahari ammo Oromiyaa waan jeedhamu iyuu jirachuu hin qabu jeedhani media hundan labsa jiru. Jara kana laman waliin Deemokrasi fi Bulchiinsa garii Ethiopia kessatti fidun mirga dhala nama kabachisuun hin danda’muu jeena. Oromoon Hariiroon nu qabachuu qabnuu wara akka keenya rakko qaban ummata Somali, Sidama, Beneshangul, Gambela, Kafa fi Agawu kkf hunda waliin hariiroo ummachuun siirna Kolonefata buqisuu qabna. Kana irratti qoorannon goodhame kitaba ta’ee maxanfamee jira.
Kaayyoon keenya kaayyoo habashoota hundan fala dha waan wal fakatuu hin qabnu. Fakeenyaf:- Bulchiinsi gariin Wayyanee /TPLF oddesitu seera Bulchiins gariin ittin madalamuu tokko iyuu hin qabu. Bulchiins gariin Mirga dhala nama guutuma guututi kabachisa, mirga Bilisumaan yaaduu, dubachuu fi mirga siyyasa gosa kami iyuu gegesuu ni kabachisa. Uumani biyya sun Tajajila logii hin qabne wal qixaa argachuu mirkanessa, seera fi Heera biyya sana durati hund wal qixee gaafatamuu fi wal qixee mirga isaa kabajamuu mirkanessa. Democratic Institutions and Good Governance biyya tokko keessati ijarun waraqaa irratti qoofa bareesani dhisuu utuu hin tanee qoorannoo irratti kan hunda'ee gaafiinfi tajjajili ummati feedhu yeroo isaa egatee deebi akka argatuu goochuu danda’uu dha. Wayyaneen wa'ee kana hojii irra olchuu miti raftee abjoote ilee hin beektuu, waan Expertooni biyya ala qoophessan itti kenan ilee seera dubfte irratti mari’atee hin beektuu. Bara 2002 Deemokirasin Haraa TPLF galmi isaa essa jeedhamee gaafi gaafatamanf deebi isaa “ Yoo tole itti milikofne Socialism siirna wal qixummaa ijaraa yoo milika’uu dadhabne ammoo siirna Kapitalism ijaraa” kan jeedhu ture. Wa'ee bulchiinsa garii duubachun ala atamiin akka hojii irra olchamuu yaadan hin beekan, siirna ykn institution ykn adeemsa bulchiinsii gariin itti hojii irra oluu documeenti fi regulation jirachuu qaba kana hunda Ethiopian hin qabdu.
Daldala walfakata fi gosa tokko Tigire fi Oromoo yoo hojeetan Basii ykn Gibira Oromoon tokko kafaluu fi Tigiren tokko kafaluu wal qixaa miti. Bara 2001 Kubaniya ZFMSH qabeenya ijoole Oromoo ta’ee fi obbo Nagasa Tumsa geggessa turantu fi Kubaniya Ambassador jeedhamutu daldala wal fakatuu geggesa ture. Ambassador TPLFti hirkate waan jiru Sharafa ala utuu hin basin galchun meesha tokko qarshi 25 yeroo gurguru ZFMSH ammoo meesha sana qarshi 100 yoo gugure ilee ni kassara ture, sababin isaa ZFMSH ashura ykn qaraxaa olana akka kafaluu goodhama. Ykn Ashura (Qaraxaa) Ambassador kafaluu qabuu ilee ZFMSH irratti ida’amee akka kafalamuu goodhama ture jeechudha kanafuu haqi hin jiru jeechuudha. Kana malee EFERT kubaniyan TPLF meesha biyya alati galchuu hunda ashura (qaraxaa) tokko malee hanga harati galcha jira. Gibira biyyya keessa olee hin kafaluu. Siirna Abba Iree wayyanee keessatti tajjajili siivil servisin keenuu qabu logi fi siyyasa irratti kan hunda’edha. Murtee kan keenu siivil servisi (civil service) utuu hin tane dhabbilee siyyasa fi oganoota siyyasa TPLFn murtefama kun ammoo yakka. EU twelve principles of good democratic governance encourage local authorities to assess and if necessary improve the quality of their governance.-
Competence and capacity,
Innovation and openness to change;
Human right cultural diversity and social cohesion
Kun seera wari Europa ittin Bulchiinsa garii dhuga ummata isaan ittin tajjajila jiran TPLF wagoota 25 darban keessati meere kana keessa isaa kami hojii iraa olche?. Olchuu ilee hin barbaduu, gara fula durati ilee hin feedhu sobe waraqaa irra ka’ee ittin saba gowomosa malee. Nafxanyan Amahara ammoo hanguma Tigire kana ilee sobani nama gowomsuu hin beekan, waan hunda isiinf hin ta’uu, kanaf mirga hin qabdan nun jeedhu. Daabaleen Oromoo Habasha jala bu’ee figuu utuu hin tane Oromoo fi Oromiyyaf mulata atamii qabna jeedhe mulata garii qabate deemuu qaba. Kitaba Bu’aa ba’ii qabsoo ummata Oromoo kutaa 4ffaa “ Oromiyya Bilisoomtee akkamiti ijaruu qabna jeedhuu egalee fula 685 hanga 805 keessati dhimi kun ibsame jira.
Namoon Oromoo hin ta’iin garuu dhuga beekan akka Gazeexessa Tamasgen Desalenyi “የቱንም ያህል የእስር ቤት ደጃፎች ከዚህም በላይ ቢጨናነቁ፣ የቱንም ያህል የእስረኞቹ ሰቆቃ እያደር ቢበረታ ከእንግዲህ በኦሮሚያ ምድር በፍርሃት ዝም-ጭጭ ብሎ የሚተኛ ሊኖር እንደማይችል ዛሬ ላይ ቆሞ መናገሩ ‹‹ሟርተኛ›› አያስብልም፡፡” jeedhe yamuu ragaa ba’uu Diasporan Oromoo ammoo biyya demokartawwa USA, Europa, Australia ta’aan Siirna Abbaa Hiree wayyaneen yeroo isaan farsan ilaaluun gadda gaddaa caaluu dha, kun waan obsa nama dhorkudha. Oromoon diini isaa Habasha dha erga jeene murtesine atamiin Habasha jala hirira?. Oromoon atamiin Paltaki mana marii Oromoo dhisee maliif Paltak Habasha irratti tufatama isaan waliin mari’ata?; Oromoo (Church) walda Amanta Oromoo fi Mazjida Oromoo cuufee maliif walda amanta Habashatti waaqeefata? Ykn maliif Habasha waliin salata?, utuu jarii isaan tufatan maliif isaan jala adeemuu filatuu?. Biyya ala ta’aan erga kana goodhan OPDO biyya jirtu irra mal caaluu?. Ginbot 7 waliin hiriruu fi TPLF waliin hirirun adda aduman isaa mali?. Oromoon xinnoo dhaabatee yaaduu qaba. Qajeela ykn bareeda horma iraa, jajalata ykn fokisaa ofi wayya jeedhe maliif yaadu dadhabee?, jarii kun kaleesas harasi wagga 150 booda afaan keessanfi enyuuma keessan dhisaa nun jeecha jiru, maltuu argaminan wal jala ya’uu egalee?.
Oromoon Habashoota kolonefatamee Bilisummaa ba’ee walabuma isaa labsachuu qaba malee itti kabebsane deemuu hin qabnu. Kun Dr. Hailee Fida faa ilee kan galafatee waan ta’eef. Oromoon Habasha waliin hiriree yoomi ilee bilisumma isaa argachuu hin danda’uu. Garboonfatan qabsa’ee garbooni isaa akka bilisoomtuu kan goodhee adunya kana irra hin jiru Siyyasa adunya baranee keessati hin arginee. Garboonfatan Garboota isaa gurmeesee of foonqoolchee of kufisuu hin jiruu. Oromoo dhabadhuu yaadi waan hojeecha jirtu. Gartuun tokko lafuma ka’ee Habasha Moofa jala adeemuu fi waliin shubisuti egalan garii tokko ammoo kara OPDO Embassy Ethiopia jala adeemuti ka’ee. Kun seena walaluu, haqa hirnfachuu fi feedhi fi fayyidan gowomfamuu dha. Bilisummaan nami dhuunfati agachuuf fi Bilisumman Uuatatii tokko akka argatuuf yeeroo qabsoofnuu feedhi, fi fayyida dhuunfa keenya hunda dhiifne ta’uu qaba. Kun ta’uu banan feedhi dhunfa of gutachuu daldala banati daldalachuu ykn hoji mootummati qacaraman hojeechu dha malee maqa qabsoo qabatan kayyoo gootoon meeqa itti wareegaman kayyoo haqa diiguu hin qaban.